5 ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ
ဥရောပ၏သဘာဝနှင့်ရှုခင်းများကနတ်သမီးပုံပြင်များကိုလှုံဆော်ပေးခဲ့သည်. ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်များသည်အံ့သြစရာကောင်းသည် တောင်တက်လမ်းကြောင်း ၎င်းသည်ကမ္ဘာ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအံ့ဖွယ်ရာအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ဟန်ဂေရီအတွက်ထူးခြားတဲ့ဂူ, ပြင်သစ်တွင်စိမ်းရေနှင့်အတူ Grand Canyon အ, သြစတြီးယားရှိရေခဲတောင်ပံများ, အီတလီနိုင်ငံရှိပိရမစ်ပုံတောင်ဖြစ်သည်, များမှာ5ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအအံ့ဘွယ်သောအမှု၏.
သဘာဝ၏ဤအံ့ဖွယ်ရာများသည်သင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုပျောက်ကွယ်သွားစေလိမ့်မည်, နှင့်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်များအတွက်အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းသည်. သငျသညျတောင်တက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားတစ်စီးကိုယူချင်ပါတယ်ရှိမရှိ, ဤ5အံ့ဖွယ်အမှုများသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမဖြစ်မနေလည်ပတ်ရမည် ဥရောပကိုသွားမယ်, အနည်းဆုံးတစ်သက်တာအတွက်.
1. ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ: Eisriesenwelt, သြစတြီးယား
တောင်ပေါ်မှာသီချင်းဆိုနေကြတဲ့ The Sounds of Music နဲ့ Von Trapp ကလေးတွေက Salzburg ကိုသင်မှတ်မိလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့, Hochkogel တောင်တန်းတွေအောက်မှာ, ဥရောပရှိအကြီးဆုံးဥမင်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်. Eisriesnwelt ရေခဲဂူ သြစတြီးယားတွင်ဥရောပ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်. အားလုံးအထက်, ဒီ 3000o စတုရန်းမီတာအတွင်းမီးမောင်းထိုးပြရေခဲနန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်, Eispalast.
စိတ်ဝင်စားစရာကဒီကီလိုမီတာ ၄၀ ရှိတဲ့ဂူဟာ Salzburg နဲ့ဝေးတဲ့ရထားစီးတာပါ, နှင့်ရထားနာရီတိုင်းထွက်ခွာမည်. အဆိုပါ Werfen ကနေအပြင်, တစ်ဦးရှိပါတယ် 15 ဂူသို့မိနစ်မိနစ်ဘတ်စ်ကားစီးသည်. ထို့အပြင်, အများဆုံးခရီးသွား။ ည့် ဂျာမနီသို့, ဒီသဘာဝကအံ့သြစရာရှာဖွေတွေ့ရှိကြပြီမဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ဟာအထူးစူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. သင် ၄ နာရီတက်ရန်သို့မဟုတ်လုပ်နိုင်သည်3ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်စီးနင်းလိုက်ပါ.
2. ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ: Verdon ချိုင့်ဝှမ်း, ပြင်သစ်
ပြင်သစ်၏ Grand Canyon သည်တောင်ဘက်ဒေသ Provence အထိကျယ်ပြန့်သည်. မတ်စောက်သောကမ်းပါးများနှင့်ထုံးကျောက်, မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောရေကန်၏ရေအတွက်အံ့မခန်းနောက်ခံအတွက်ပါစေ. ထိုကွောငျ့, ဒီသဘာဝအံ့သြစရာရဲ့ထူးခြားတဲ့အမည် "Gorges du Verdon" အစိမ်းရောင်၏ Gorges ကိုဆိုလိုသည်, ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်.
Provence ရှိဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေကန်သည်နွေရာသီရေကူးခြင်းနှင့်အေးမြခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, အဖြစ်တောင်တက်ပရဒိသု. ရှိပါတယ် 1500 အထက်မှဤဥရောပအံ့ adm မှုကိုနှစ်သက်လိုသောစိတ်အားထက်သန်သောတောင်တက်သမားများအတွက်လမ်းကြောင်း. ဒါကြောင့်, သင်ရွေးချယ်လျှင် နေရောင်ထဲမှာရေချိုးချင်တယ် လှေပေါ်မှာ, သို့မဟုတ်ခြေလျင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ.
Gorges Du Verdon ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
အနီးဆုံးမြို့သည် Moustiers-Sainte-Marie ဖြစ်သည်, ပြီးတော့ပဲရစ်မြို့ကနေရထားနဲ့သွားနိုင်တယ်. ထို့နောက် Pont du Galettes တံတားရှိတံခါးသို့သွားပါ, ဒီသဘာဝအအံ့သြစရာရိုက်ထည့်ရန်.
Marseilles သို့ Paris Train စျေးနှုန်း
Marseilles မှ Clermont Ferrand ရထားစျေးနှုန်း
3. ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ: Matterhorn, အီတလီ
အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ Monte Cervino သည် 4,478 ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ. ဖြည့်စွက်ကာ, Matterhorn သည်ပြီးပြည့်စုံသောပိရမစ်ပုံသဏ္forာန်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်. Matterhorn ကိုအာဖရိကနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွယ်တကူဆုတ်ခွာသောအခါသဘာဝကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်. ဒီမြေယာလှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်, ခမ်းနားသောကျောက်ဆောင်ထိပ်မှ၎င်း၏လမ်းကိုတွေ့.
သငျသညျ Matterhorn အတွက်အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံရှာနေလျှင်, ထို့နောက်တောင်ခြေအခြေစိုက် igloo ရွာ၌နေပါ. ရေခဲနှင့်ဆီးနှင်း igloo မမေ့နိုင်သောညအဘို့ခရီးသွားများအတွက်နေရာထိုင်ခင်း. သငျသညျအအေးကိုကြောက်လျှင်, ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သောညနေခင်းတွင်လှပသောတောင်ကိုလေးစားခြင်းအားဖြင့်သင်ဘားနားမှသောက်ခြင်းကသင့်အားနွေးထွေးစေသည်.
ဒီသဘာဝအံ့သြစရာကမင်းရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုရဲ့အစပဲ. သင်သည် Matterhorn ရေခဲမြစ်ကိုသွားနိုင်သည် မီးရထားခရီးသွားလာ Zermatt ကနေ. ဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးရထားဘူတာတွင်, ၃၆၀º အီတလီ၏မြင်ကွင်းကျယ်ကိုသင်သဘောကျနိုင်သည်, ဆွစ်ဇာလန်, နှင့်ပြင်သစ်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နွေ ဦး ရာသီ၌မည်သည့်ထောင့်မှမဆိုပြည့်စုံသောရုပ်ပုံကိုရနိုင်သည်, နွေရာသီ, သို့မဟုတ်ဆောင်းတွင်း၌ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်း.
4. Aggtelek ဂူများ, ဟန်ဂေရီ
Aggtelek ဂူများသည်ဥရောပ၌အံ့ natural ဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝဖြစ်သည်. ထူးခြားသောအမည်မှာကျောက်တွင်းမှဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသောသဘာဝဖြစ်စဉ်မှထွက်ပေါ်လာသည့် 'ရေစက်' ဖြစ်သည်. အကျိုးဆက်, Aggtelek ရှိခမ်းနားထည်ဝါသောဥမင်များရှိလှပသောပုံစံမျိုးများအတွက်အရင်းအမြစ် အမျိုးသားဥယျာဉ်.
Baradla Domica ဂူသည်ဟန်ဂေရီနှင့်ဆလိုဗက်ကီးယားတို့အကြား ၂၅ ကီလိုမီတာရှည်သောကျောက်တုံးကျောက်တွင်းကြီးဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်လည်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို.
Baradla Domica ဂူသို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ရောက်နိုင်မည်နည်း?
Aggtelek ဂူများသည် ၄ ​​နာရီကြာသည် ရထားခရီး အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဘူဒါပက်မှ. ဒါကြောင့်, သငျသညျလျှင် တစ်ရက် - ခရီးစဉ်စီစဉ် Budapest ကနေ, ဒါကနည်းနည်းတင်းကျပ်နိုင်ပါတယ်.
5. ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအံ့ဖွယ်များ: အဆိုပါ Black ကသစ်တော, ဂျာမနီ
၎င်း၏ဆန်းကြယ်မှုများနှင့်သိပ်သည်းသစ်ပင်များကျော်ကြား, အဆိုပါ ဂျာမနီရှိသစ်တော ဥရောပ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝအံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်. Baden-Wurttemberg ရှိဤအံ့ဖွယ်တောင်တန်းသည်ဒဏ္legာရီများစွာကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်, Grimm ရဲ့ပုံပြင်များလိုပဲ. ဤနေရာသည်သင် Baden-Baden spa မြို့မှလမ်းလျှောက်ရာနေရာဖြစ်သည်, နှင့်တစ် ဦး ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်ပုံပြင်များနှင့် cuckoos သို့.
သင်တစ် ဦး စွန့်စားမှုစိတ်ဝင်စားလျှင်, Triberg ရေတံခွန်, သစ်တောတောင်တက်လမ်းကြောင်းတက်စောင့်နေကြသည်. ဂျာမနီရှိဤခမ်းနားထည်ဝါသောသဘာဝအံ့ဖွယ်ကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာလမ်းပြလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သောနောက်ဆုံးအရာမှာသစ်တောထူထပ်သောဒေသများတွင်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ဤ5ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအတိုင်းအံ့ဖွယ်အမှုများသည်ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးနက်နဲသောအရာဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, ဥရောပကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား like ည့်တစ် ဦး လိုလေ့လာပြီးလူကြိုက်များတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ကြည့်ရှုလမ်းကြောင်း, (သို့) သင်သည်ဥရောပ၌အလှဆုံးနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်. အများဆုံး, အရေးကြီးတာက, ဤသဘာဝသဘာဝများအားလုံးကိုရထားနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, ဥရောပအလယ်ပိုင်းမြို့ကြီးများကနေ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဤသဘာဝအံ့ဖွယ်ရာများသို့ရထားဖြင့်မည်ကဲ့သို့သွားနိုင်ကြောင်းသင်ကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးသဘာဝအလှ ၅ ချက်” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-natural-wonders-europe%2F%3Flang%3Dmy ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သဘာဝတရား သဘာဝတရား သဘာဝတရား ရထားခရီးသွား ချစ်သူ ဟုတ်ပါတယ် ချစ်သူ